एक फेविकॉन के हो र तपाइँ तपाइँको पृष्ठको लागि कसरी एक बनाउन सक्नुहुन्छ क्रिएटिव अनलाइन
एनकर्नी आर्कोया | | प्रतीकहरू
पक्कै पनि, एक भन्दा बढी अवसरहरूमा तपाईले फेभिकनको बारेमा सुन्नुभयो। यो वेब डिजाइनको साथ नजिकबाट सम्बन्धित छ, र यो महत्त्वपूर्ण पृष्ठ हो कि प्रत्येक पृष्ठमा, यो अनलाइन स्टोर, एक ब्लग, एक वेबसाइट, आदि। तिनीहरू तिमीलाई सोध्न जाँदैछन्। तर, फेभिकन भनेको के हो? यो केको लागि हो? र सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण, यो कसरी गरिन्छ?
यदि यस बारे तपाईलाई धेरै सन्देह छ भने, यहाँ हामी तपाईलाई कुञ्जीहरू दिँदैछौं ताकि तपाईले यसलाई बुझ्नुहुनेछ र सबै भन्दा माथि, ताकि तपाई यसलाई आफ्नो परियोजना भित्र प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ र राम्रो प्रस्तुतीकरणको साथ छोडियो। हामी तपाईलाई आश्वासन दिन्छौं!
1 फेभिकन भनेको के हो?
2 फेभिकॉन किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
3 फेभिकन कसरी बनाउने
3.1 फोटोशप, जिम्प ...
3.2 अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गर्दै
3.3 WordPress संग
हामी फेभिकन भनेको के हो भनेर व्याख्या गर्न शुरू गर्दैछौं जुन तपाईं यसलाई बुझ्नुहुन्छ। र यसका लागि तपाईलाई व्यावहारिक उदाहरण दिनु भन्दा राम्रो अरू केही छैन। कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं अहिले ब्राउज गर्दै हुनुहुन्छ (वास्तवमा, तपाईं हामीलाई पढ्दै हुनुहुन्छ)। तर तपाईंसँग केवल एउटा ट्याब छैन, तर तीमध्ये धेरै। तपाईंले याद गर्नुहुनेछ कि ती प्रत्येकमा त्यो पृष्ठले के प्रतिबिम्बित हुन्छ भन्ने नाम देखा पर्दछ, यो यूट्यूब (किनकी तपाईं पृष्ठभूमि संगीत सुन्दै हुनुहुन्छ), जीमेल (किनकि तपाईंको मेल खोलिएको छ) वा यो पृष्ठ हुन सक्छ।
प्रत्येक नामको पछाडि, बाँयामा, सानो छवि देखा पर्छ, वर्गमा। यूट्यूब र जीमेलमा एक निश्चित छ कि उनीहरूसँगका लोगोहरूले पहिचान गर्न सक्छन्, तर बाँकी ट्याबहरू नि?
ठिक छ, तपाईले जे हेर्नुहुन्छ त्यो फेभिकन हो। अर्को शब्दहरुमा, यो एक हो प्रतिमा जुन तपाइँ भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ पृष्ठसँग सम्बन्धित छ, यसैले यस विवरणमा ध्यान दिन यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि जब तपाइँ पृष्ठलाई मनपर्ने वा सर्टकटमा थप्नुहुन्छ, फेभिकन त्यो पृष्ठको "छवि" हुन्छ र त्यसैले तपाइँले यसको डिजाइनको देखभाल गर्नुपर्दछ ताकि यो राम्रोसँग सम्बन्धित छ (र सबै भन्दा माथि राम्रो देखिन्छ यो अरूबाट अलग गर्न)।
यस सानो आइकनमा सामान्यतया साइज सेट हुन्छ जुन १× × १ p पिक्सेल हो (यद्यपि यो 16२x16px मा पनि सेट गर्न सकिन्छ)। यसको भित्र तपाईंले ध्यान राख्नु पर्दछ कि तपाईंले राख्नु भएको सबै चीजहरू सही रूपमा देखिएको छ, अन्यथा, यो सानो पहिचान योग्य ठाउँको रूपमा देखा पर्दछ (र त्यसले तपाईंको पृष्ठको धेरै नराम्रो छवि दिन्छ)।
फेभिकॉन किन यत्तिको महत्त्वपूर्ण छ?
अब जब तपाइँ फेभिकन भनेको के हो भनेर जान्नुहुन्छ, र तपाईंले यसलाई प्राय: खोल्नुहुने पृष्ठहरूमा अवस्थित गर्नुभयो, के तपाईंले याद गर्नुभयो कि आज त्यहाँ थोरै र थोरै पृष्ठहरू हराइरहेका छन्? यो किनभने यो वास्तवमै लाक्षणिक दृष्टिकोण र जान्न कसरी महत्वपूर्ण दिन महत्वपूर्ण छ। त्यो हो, तपाईं एक ब्रान्ड वा कर्पोरेसन छवि व्यक्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ जुन विवरणहरूको बारेमा ख्याल राख्दछ।
यद्यपि फेभिकॉनसँग अन्य प्रयोगहरू पनि छन् जस्तै:
तपाइँको पृष्ठ को पहिचान को रूप मा सेवा गर्नुहोस्। सामान्यतया यो फेभिकन लोगोसँग सम्बन्धित छ जुन तपाईंसँग आफ्नो वेबसाइटमा हुनुहुन्छ, केवल सानो आकारमा। तर जब लोगो धेरै ठूलो हुन्छ र बटनमा देखिने छैन, तपाईं त्यससँग सम्बन्धित केहि छनौट गर्नुहुन्छ।
तपाइँ प्रयोगकर्ताहरूलाई मद्दत गर्नुहुनेछ जसले तपाइँको पृष्ठलाई दृढतापूर्वक पहिचान गर्न सुरक्षित गरेका छन्। तसर्थ, यदि तिनीहरूले url, वा कम्पनीको नाम याद गरेन भने पनि, फेभिकनको छवि को कारण उनीहरूले यसलाई पत्ता लगाउँदछन्।
SEO संग "राम्रो" हुन। यसलाई नुनको अन्नको साथ लिनु पर्छ। र यो यो हो कि फेभिकॉन भएको वा नगरेकोले सीईओलाई सीधा असर पार्दैन (त्यो हो, यसले तपाईंलाई राम्रो वा नराम्रो स्थितिमा राख्दैन वा यसलाई राखेकोमा नराम्रो हुन्छ)। अब यो झन् झन् सामान्य छ कि जब कुनै ब्राउजरले कुनै पृष्ठ प्रविष्ट गर्छ, त्यो त्यो फेभिकन खोज्छ र जब फेला पार्दैन, तब यसले 404० XNUMX त्रुटि दिन्छ। र तपाईंलाई थाहा छ यी त्रुटिहरू एसईओको लागि राम्रो छैन। पृष्ठ
फेभिकन कसरी बनाउने
हेरेपछि, यो स्पष्ट हुन्छ कि वेब पृष्ठ भएको बेला फेभिकन एक आवश्यक तत्व हो। अब, तपाइँ कसरी एक बनाउन गर्नुहुन्छ?
तपाईंलाई थाहा हुनुपर्दछ कि, प्राय जसो केसहरूमा, यसले के गर्दछ त्यो वेबसाइटको लोगो छनौट गर्नुहोस्, वा यदि यो धेरै ठूलो छ भने, यसलाई चिन्ने कुनै चीज। उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंसँग एक टेलिभिजन वेबसाइट छ जुन तपाईंले कुनै तरिकाले कल गर्नुभयो। तर त्यो फेभिकनमा धेरै ठूलो छ। यसको सट्टामा, तपाईं एक टेलिभिजनको तस्वीर राख्न सक्नुहुन्छ ताकि तिनीहरू यो सम्बन्धित छन्। यी अवस्थाहरूमा, यो सिफारिश गरिन्छ कि यो तपाइँको वेबसाइटको जस्तै रंगहरू लगाउनुहोस् ताकि तिनीहरूले यसलाई अझ राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्दछन्।
र अब हामी कसरी फेभिकॉन सिर्जना गर्न सक्छौं? ठिक छ, तपाईंसँग धेरै विकल्पहरू छन्:
फोटोशप, जिम्प ...
अर्को शब्दहरुमा, हामी इमेज एडिटिंग प्रोग्रामको बारेमा कुरा गरिरहेछौं किनकि फेभिकन एक इमेज जस्तै बनाइएको छ। अवश्य पनि, तपाईले यसलाई .ico ढाँचामा बचत गर्नु पर्दछ यसलाई पहिचान गर्नका लागि किनकि यसलाई jpg, gif वा समानको रूपमा छोड्न सकिदैन।
यो गर्ने यो तरिका तपाइँ अझ राम्रो अनुकूलन अनुकूलन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, यसलाई स्क्र्याचबाट सिर्जना गर्न प्रबन्धन गर्दै र तपाइँले चाहानु भएको फिनिश दिनुहोस्। सामान्यतया यसका लागि तपाई एक छविको साथ सामान्य आकारमा काम गर्नुहुन्छ र त्यस बटनको आकारमा यसलाई अनुकूलन गर्नुहोस्।
वास्तवमा, यो अपलोड र विभिन्न ब्राउजरहरूमा परीक्षण गरिनु पर्छ कि राम्रो देखिन्छ, प्रतिनिधित्व गर्दछ र सबै भन्दा माथि, बुझिन्छ।
अनलाइन उपकरणहरू प्रयोग गर्दै
यस अवस्थामा हामी वेब पृष्ठहरू सन्दर्भ गर्दछौं जुन तपाईंले चाहानु भएको कुनै पनि छविलाई सेकेन्डको मामलामा फेभिकनमा रूपान्तरण गर्ने कुरामा ध्यान दिन्छ। तर तपाईंसँग विकल्प पनि छ तपाइँको फेविकॉन ती पृष्ठहरूसँग सिधा डिजाइन गर्नुहोस्।
यदि तपाइँ पूर्व चाहानुहुन्छ (छवि अपलोड गर्नुहोस् र यसलाई रूपान्तरण गर्नुहोस्), तब हामी फ्याभिकन जेनरेटर वा फ्याभिक-ओ-म्याटिकको सिफारिस गर्दछौं। तर यदि तपाइँ पछिल्लो चाहानुहुन्छ (यसलाई स्क्र्याचबाट डिजाईन गर्नुहोस्), फेभिकोन.इओ वा एक्स-आइकन सम्पादकमा शर्त लगाउनुहोस्।
के तपाईंको पृष्ठ वर्डप्रेसमा बनेको छ? र के तपाइँ जान्नुहुन्छ कि तपाइँ आफ्नो फेविकॉन सिर्जना गर्न त्यो प्रणाली प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाईं केहि प्लगइनहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ जुन तपाईंले अपलोड गर्नुभएको छविमा आधारित यो बटन सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ (वा तपाईंले अपलोड गर्नुभयो)। साथै पनि "देखा पर्नु / अनुकूलन" तपाईं यो गर्न सक्नुहुनेछ।
एक पटक तपाईले फेभिकॉन गरेपछि तपाईले त्यसलाई आफ्नो वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ र यसलाई तपाइँको पृष्ठको नामको बाँया क्षेत्रमा देखाउन सक्षम हुनुपर्दछ, साथै यसलाई मनपर्नेमा बचत गर्दा। यस तरिकाले तिनीहरू सजिलैसँग तपाइँलाई चिन्न सक्नेछन् यदि पढ्नको लागि रोकिनु भएन यदि यो पृष्ठ हो जुन उनीहरू साँच्चिकै भ्रमण गर्न चाहान्थे।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » पुनरावृत्त » प्रतीकहरू » फेभिकन भनेको के हो?